Airways New Zealand mepee usoro mmezi ikuku ikuku (ATC) na Beirut, Lebanon
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Airways New Zealand mepee usoro mmezi ikuku ikuku (ATC) na Beirut, Lebanon
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • Technology • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Na emume pụrụ iche emere na Beirut ụnyaahụ, Airways New Zealand na Directorate General of Civil Aviation (DGCA) Lebanọn mepere ụlọ ọrụ mgbapụ ụgbọ elu dị elu (ATC) - ọzụzụ ATC n'ọdịnihu na Lebanon maka ọtụtụ iri afọ na-abịa.
Airways International, ogwe aka azụmaahịa nke ndị na-eweta ọrụ ikuku ikuku nke New Zealand, emechaala nrụnye nke ụlọ nrụpụta ụlọ ọrụ TotalControl LCD na simulators abụọ radar / non-radar na Beirut-Rafic Hariri International Airport mgbe ọrụ ọnwa 12 gachara. Ulo a, nke a ga-eji zuo ndi DGCA's ATC na umu akwukwo site na iji ihe omuma atu dika nke uwa, ka enyere aka n'ilezu nyocha nke nnabata a n'izu a.
Onye Minista na-ahụ maka Ọha na Ọha na Lebanọn Youssef Fenianos mepere ụlọ ọrụ nnabata ahụ na emume ndị gọọmentị Lebanọn na ndị nnọchi anya DGCA Lebanọn gara, yana International Civil Aviation Organisation (ICAO), Airways na New Zealand Trade na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị gara Lebanon kaa akara ukwu. Nkwekorita iwu ulo ma wunye simulator di n’etiti Airways International na ICAO n’aha DGCA Lebanon.
Onye isi ụgbọ elu Airways International, Sharon Cooke, kwuru na nzukọ a dị mpako ịkwado DGCA site na ịnye teknụzụ imepụta ụwa. “Airways nwere obi ụtọ ịkọwa akara a dị mkpa mgbe ọ dụsịrị ọrụ nka dị mkpa maka DGCA na gọọmentị nke Lebanon. Anyị na-ele anya ịkwalite mmekọrịta a ka DGCA na-ewulite ikike ọzụzụ ATC ha, “Ms Cooke na-ekwu.
Onye isi oche DGCA Lebanon nke Ngalaba Navigation Air Kamal Nassereddine na-ekwu na Airways 'TotalControl simulator bụ ihe kachasị mma iji nweta isi ihe DGCA chọrọ, nke gụnyere isi na-eduga, eserese foto na ezi uche nke iji.
“Anyị nwere mmasị n’ebe Airways nọ n’oge ọrụ ahụ dum. Ha na-eme ihe n'eziokwu ma na-agbanwe agbanwe, ma soro DGCA soro nweta anyị iji nye anyị simulator kacha mma. Airways nwere aha siri ike dịka ọkachamara zuru ụwa ọnụ na simulation na ọzụzụ ATC - ọzụzụ anyị natara bụ ihe dị iche, "ka Mr Nassereddine na-ekwu.
Total simulators TotalControl arụnyere na ụlọ ọrụ DGCA na Beirut International Airport na-e imitateomi mpaghara ozi ụgbọ elu zuru oke nke Lebanọn, na-eji ezigbo eserese foto-ezigbo eserese maka ụlọ elu na iulationomi usoro ATM maka radar. Ndị na-anya ụgbọ elu DGCA nwere ike ịmepụta ngwa ngwa ma gosipụta mmega ahụ, yana obere ọzụzụ nwere ike ijikwa ọnọdụ dị mgbagwoju anya dị mfe.
Airways 'Total Control ịme anwansị technology enhances ogo na ọsọ nke ọzụzụ ATC, na-ebelata oge ọzụzụ ọzụzụ na-arụ ọrụ ka ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ na-enwe nrụgide ka ukwuu iji zụọ ndị njikwa ụgbọelu zuru oke iji gboo mkpa. Onye Airways mepụtara na mmekorita ya na ndị ọkachamara 3D eserese na New Zealand Animation Nnyocha Ltd, TotalControl simulators nwere ike ahazi iji gboo mkpa ANSPs.
Airways nọ na-ebunye azịza ọzụzụ ATC yana ọrụ ndụmọdụ na mpaghara Middle East ruo ihe karịrị afọ 20. N'ime afọ abụọ gara aga nzukọ ahụ nyefere ọzụzụ maka ndị ahịa isi na Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait na Bahrain.